Chainalysis - inkampani owabhubhisa yokufihla Bitcoin - Blockchain Izindaba
Januwari 26, 2018 admin
Chainalysis – inkampani owabhubhisa yokufihla Bitcoin
Emazweni athuthukile kakhulu, umsebenzi asebenzayo ingaphansi yokuwufundisa imithetho ukulawulwa cryptocurrencies futhi Ukuvinjwa. Ngo nokubhalwa izikweletu, avame esizwa izinkampani ukuqapha amanethiwekhi ukuvinjelwa, omunye edume kakhulu – Chainalysis. kuphela 2017 inkampani uhola imali elinganiselwa ku $ 700,000, ibambisane isimo futhi komthetho ejensi.
Chainalysis yasungulwa ngo 2014 ngu jano Moller, Jonathan Levin noMichael Gronager. Isiqondiso eyinhloko Inkampani utjheja okuvimba futhi cryptocurrency ukuthengiselana yokulwa zemali nokukhwabanisa. Izinkampani ukuthi sihlinzeke izinhlelo ezifanayo eziningi, kodwa cishe kuyo yonke iminyango US, kanye nezinhlangano European ezifana Europol, zisebenza Chainalysis.
Ngonyaka odlule Chainalysis bathola okungaphezu $ 700,000 kusukela US Department of Homeland Security (DHS), Isevisi US Internal Revenue (IRS) US Immigration and Customs Control Izikhungo (ICE) ngomsebenzi walo. Futhi ngonyaka odlule, inkampani njalo baxhumane nezinhlangano ezizimele, njengoba kufakazelwa ngemibiko ngekota ezikhomba oxhumana eziningi futhi izivumelwano zobambiswano.
Futhi omunye amakhasimende ejwayelekile ye Chainalysis kwaba US Federal Bureau of Investigation (FBI), eye agcwaliswa ngokuphindaphindiwe akhawunti yenkampani eminyakeni embalwa edlule.
Ngenxa ngokubambisana neNhlangano Chainalysis, FBI wakwazi ukufeza imiphumela ephawulekayo njengoba kuphenywa izenzo kubahlanganyeli engaziwa ukuhweba indawo Silk Road, kanye ufunde mayelana imininingwane ucabanga we Math Gox lokushintshisana. Ngemva kwakho konke, kwabasebenzi Chainalysis zilandelwa ulahlekile 650,000 bitcoins, okuyinto waziwa ngesikhathi sokulalelwa ku Congress.
Ngaphezu kwalokho, sibonga umsebenzi inkampani zokuqapha, ekupheleni kuka-November 2017, inkantolo yezinhlangano zamazwe US ​​isiyalele Coinbase exchange ukunikeza idatha okuyimfihlo 14,000 abasebenzisi. isinqumo esinjalo senziwe ukukhanya uphenyo yisevisi US Internal Revenue (IRS), okuyinto esolwa ukuthi abasebenzisi exchange ethola imali etholakale ngokudayiswa cryptocurrency, ezimweni eziningi, ngisuke intela. Ngakho, ngokuvumelana IRS idatha ye 2015, intela ku inzuzo kusukela imisebenzi nge bitcoin yakhokhwa kuphela 802 abantu.
website yenkampani uthi Chainalysis okholwa cryptocurrency nobuchwepheshe ivimbela, futhi umgomo wenkampani ukunikeza izinhlangano ngamathuluzi ukuvimbela yezenzo zokukhwabanisa emkhakheni wezezimali, ngenkathi kuhlonishwa ilungelo ubumfihlo. Nokho, Empeleni, amasevisi blockanalysis yenkampani ukuxhuma abacacisiwe ne ukuthengiselana ezithile kunethiwekhi.
Ngakho, sibonga izinkonzo Chainalysis, IRS, Ngokwesibonelo, uqaphe izenzo abanikazi bitcoins nezinye cryptocurrencies futhi uqaphe ukukhokhwa kwezintela. Futhi lokhu kusho ukuthi ukuthengiselana nge cryptocurrencies, ezifana bitcoin, ayikwazi kubhekwe engaziwa. Futhi, izinkampani ezisebenzisa amasevisi Chainalysis ukuthola imibiko enemininingwane ku ukuthengiselana on block, amakhasimende abo zabo nababambisani.
Iqiniso lokuthi inkampani Chainalysis buthola amakhasimende abaningi ngokwengeziwe phakathi abamele isimo kanye nezakhiwo, ekhathaza amalungu amaningi omphakathi mfihlo abakholelwa ikusasa cryptocurrency ngaphandle isiqondiso isimo kanye ilungelo wonke umuntu, beqinisekisa ukungamethembi uRamaphosa. Nokho, ngokuvumelana inhloko yabangamashumi Hermitage Capital Isikhwama Bill Browder, ngenxa yezenzo izinkampani ezifana Chainalysis, cryptocurrencies ayabaluleka ngendlela ngokuya ezikhangayo nokunokwethenjelwa imali zimali.
Blockchain Izindaba 10 Januwari 2018
Metatron kudedela cr ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 26 Januwari 2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 27 Januwari 2018